Corona မကူးစက်စေဖို့ နေအိမ်လေးကို သန့်ရှင်းစို့ - Page9of 31 - Hello Sayarwon
လက်ရှိမှာ လူတိုင်းစိုးရိမ်နေကြတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မကူးစက်စေဖို့ ကာကွယ်ရေးကို စတင်ရမယ့်သူက ကိုယ်တိုင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်မှာရော မိသားစုဝင်တွေကိုပါ ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ဆိုရင် နေအိမ်လေးကို သေချာ သန့်ရှင်းဖို့လိုပါမယ်။
အခုကာလ အလုပ်တော်တော်များများက အိမ်ကနေလုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေ (Work from Home)ဆိုတော့ နေအိမ်လေးကို သေချာ သန့်ရှင်းရင်ကို ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ဘယ်လိုတွေများ သန့်ရှင်းကြမလဲ…..
နေအိမ်လေးကို အခုလို ပိုးသတ်သန့်စင်ပါ
နေအိမ်လေးမှာ ကိုရိုနာအပါအဝင် ရောဂါပိုးတွေကင်းစေဖို့ဆိုရင်
နေအိမ်ကို နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အရင်က ရေသန့်သန့် တဘက်စသန့်သန့်လေးသုံးတယ်ဆိုရင်တောင် အခုလိုအချိန်မှာ လိုအပ်ရင် ပိုးသေစေနိုင်တဲ့ Dettol လိုအမျိုး ပိုးသတ်ဆေးကို သုံးပြီး သန့်စင်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာရည်ကို သုံးပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
သန်ရှင်းတဲ့အခါတိုင်း လက်အိတ်ဝတ်ပြီးလုပ်ပေးပါ။ ဒါမှ လက်ကို ရောဂါပိုးတွေ မကပ်တွယ်တော့မှာပါ။
နေအိမ်ရဲ့ ကြမ်းပြင်၊ တံခါး၊ တံခါးလက်ကိုင်၊ မီးခလုတ်တွေ၊ လက်ရန်းတွေ၊ ဖုန်း၊ အိမ်သာ၊ အိမ်သာတံခါးလက်ကိုင်၊ ရေချိုးခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုခန်းပါ မကျန် အကုန်ကို သေချာလေးသန့်စင်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒါ့အပြင်နေ့စဉ် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကားသော့၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့၊ ကီးဘုတ်စ်၊ မျက်မှန်၊remote control စတာတွေကိုပါ သန့်စင်ပါ။
အရင်က ပုံမှန် သန့်ရှင်းရင်လုံလောက်ပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ ပိုးသတ်ရမှာပါ။ ပိုးသတ်ဖို့ဆိုရင် ပိုးသေစေနိုင်တဲ့ Dettol လိုအမျိုး ပိုးသတ်ဆေးကို သုံးပြီး သန့်စင်ပေးတာ ဆပ်ပြာရည်ကို သုံးပြီး သန့်စင်တာမျိုးတွေလုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။
ရက်လွန်တာမဟုတ်တဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းတိုင်းကို အသုံးပြုပြီး ပိုးသတ်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာ အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာကြောင့် နေ့စဉ် အသုံးပြုနေကျ ပစ္စည်းတွေကို သေချာလေး ပိုးသတ်သန့်စင်ပါ။
ဆိုဖာ၊ ခေါင်းအုံး၊ အိပ်ရာခင်းတွေကို နေ့စဉ် သန့်စင်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာရည်လေးကို ဗူးထဲထည့်ပြီး ဖြန်းလို့ သန့်စင်ပေးလည်း ရပါတယ်။ အိပ်ရာခင်းတွေ ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကိုတော့ ၂ ရက်ခြားတစ်ခါလောက် ပုံမှန် လဲလှယ်ပါ။
လျှော်ဖွတ်သန့်စင်အခါ ရေနွေးနွေးလေးကို ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့ ရောစပ်သန့်စင်ပေးလို့ရပါတယ်။
အဝတ်လျှော် တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်း လက်အိတ်သုံးပေးပါ။ ပြီးရင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ ဖျော်လို့ မိနစ် ၂၀ကြာစိမ်ထားပြီးမှာ လျှော်ဖွတ်ပါ။ အဝတ်လျှော် ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း လက်အိတ်ကို သေချာချွတ်ပြီး စွန့်ပစ်ပါ။ ပြီးရင် လက်ကို ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး သေချာလေး သန့်စင်ပေးပါ။
ဖျားနေသူရှိမယ်ဆိုရင် ဖျားနေသူရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို သီးသန့်လျှော်ဖွတ်ပါ။ ပိုးသတ်ဆေးထည့်ပြီးလျှော်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
မကြာခဏဆိုသလို လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ရေအသုံးပြုလို့ စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင်ဆေးကြောပေးပါ။
ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် အသုံးပြူမယ်ဆိုရင်လည်း အယ်လ်ကိုဟော အနည်းဆုံး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပါတာကို ရွေးချယ်ပါ။ လက်သန့်ဆေးရည်ခြောက်သွားမှ ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်တွယ်ပါ။ ဒါမှ ပိုးသေမှာပါ။
ဘယ်လို အခြေအနေတွေမှာ လက်ဆေးမလဲ……….
လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောပါ ဆိုပေမယ့်
• ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပြီးချိန်
• စားစရာတွေ မပြင်ဆင်ခင်
• တိရစ္ဆာန်တွေကို ကိုယ်တွယ်ထိတွေ့ပြီးတိုင်း
• တစ်ယောက်ယောက်ကို မကိုင်တွယ်ခင်
• အပြင်က ပြန်လာတိုင်း
• မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ မျက်နှာကို မထိတွေ့ခင်
• ညစ်ပေတဲ့အရာတွေကို ကိုယ်တွယ်ပြီးတိုင်း နဲ့
• ဖျားနာနေသူကို ထိတွေ့မိပြီးတိုင်းမှာ လက်ကို သေချာလေးသန့်စင်ဆေးကြောဖို့လိုပါမယ်။
အမှိုက် စွန့်ပစ်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ် အရင်စွတ်ပါ။ ပြီးရင် အမှိုက်တွေကို သေချာထည့်လို့ အိတ်ကို လုံအောင်ပိတ်ပါ။ ပြီးရင် အမှိုက်ပုံးဆီ သွားပြီး သေချာစွန့်ပစ်ပါ။ ပြီးရင် လက်အိတ်ကိုပါ တစ်ခါတည်းချွတ်ပြီး စွန့်ပစ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ လက်ကို ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးလို့ သေချာလေး သန့်စင်ဆေးကြောပါ။
ကဲ..နေအိမ်လေးကို အကောင်းဆုံး ပိုးသတ်သန့်စင်လို့ ကိုယ်တိုင်ကိုရော မိသားစုကို ကိုရိုနာဘေးကနေ ကာကွယ်လိုက်ကြ စို့လား………….
Disinfecting your home if someone is sick https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html Accessed Date 22 March 2020
How to Clean Your Home for Coronavirus https://www.nytimes.com/2020/03/18/world/clean-home-coronavirus.html Accessed Date 22 March 2020